‘संक्रमितहरु लक्षणविहिन देखिएकाले कोरोना सर्ने सम्भावना कम हुन्छ’ « Sansar News -->
‘संक्रमितहरु लक्षणविहिन देखिएकाले कोरोना सर्ने सम्भावना कम हुन्छ’
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०९:०४
२० जेठ, काठमाण्डौं । नेपालमा पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा बढ्दै गएपनि त्यसबाट डराउनु नपर्ने बताएका छन् ।
डा. पाण्डेले तर सर्तक भने रहनुपर्ने सुझाव दिँदै अधिकांश संक्रमित लक्षणविहिन भएको हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना थोरै हुने बताएका छन् ।
‘छोंटो समयको सामान्य बोलचालमा संक्रमण सर्दैन । अधिकांश लक्षणविहिनलाई खोकी, हाच्छ्युं, घ्यारघ्यार नहुने भएकोले भाइरस सर्नको लागि पर्याप्त लोड पुग्दैन ।’ डा. पाण्डेले भनेका छन् ।
लामो समय स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जनचेतना जगाउँदै आएका डा. पाण्डेले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा सामाजिक संजालमार्फत् सर्वसाधारणमा दैनिकजसो जनचेतना जगाउँदै आएका छन् ।
डा. पाण्डे भन्छन्
‘अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८११ पुगेको छ । संक्रमित ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २२१ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । यसरी हेर्दा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १,५६९ छ ।
-यसप्रकार मृत्युदर ०.४ प्रतिशत छ । यी ८ जना मृतकको इतिवृत्ति राम्रोसंग केलाउने हो भने ‘डेथ फ्रम कोभिड–१९’ को संख्या खासै छैन । यी केस ‘डेथ विथ कोरोना भाइरस’ हुन् ।
-अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण जोखिम बर्गमा देखिएको छैन । नेपालमा २० बर्षदेखि ५० बर्ष उमेरका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यी मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा धेरै संक्रमितमा कोभिड १९ को लक्षण देखिएको छैन । सक्रिय उमेरका व्यक्ति भारत लगायत देशमा काम गर्न जाने, पढ्न जाने वा अन्य ब्यबसाय गर्न जाने भएकोले त्यहि बर्गमा संक्रमण धेरै देखिएको छ । यो उमेरका व्यक्तिमा दीर्घरोग कम हुन्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ, नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण धेरै जनाको मृत्यु हुँदैन ।
– भारत लगायत अन्य देशमा काम गर्ने १० लाखभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश आउनको लागि प्रतिक्षारत छन् । तसर्थ केहि महिना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानेछ । राज्यले ठूलो क्षमताका सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन केन्द्रको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । नेपाल भित्रिने पहिलो नाकाबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा २ हप्ता राख्ने तथा त्यसपछि परिक्षण गरेर आफ्नो थातथलोमा पठाउने हो भने संक्रमितको संख्या त्यति धेरै बढ्ने छैन । तर राज्य अहिलेजस्तो योजनाविहीन बनिरह्यो भने यसले ठूलो क्षति गराउनेतर्फ हामी सचेत हुनु आबश्यक छ ।
-भारत तथा अन्य देशबाट आइरहेको तथा आउने नागरिक मध्ये ९० प्रतिशत गाउँमा जाने अवस्था छ । गाउँमा घरको दूरी टाढा हुने, को कहाँबाट कहिले आएको बारे थाहा हुने तथा क्वारेन्टाइनमा नबसि खुला हिंड्न नपाइने स्थिति भएको हुँदा ‘स्थानीय संक्रमण’ कम हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । सहरमा जस्तो द्रुत गतिले गाउँमा रोग सर्ने भीडभाड हुँदैन ।
-अधिकांश संक्रमित लक्षणविहिन भएको हुँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने सम्भावना थोरै हुन्छ । छोंटो समयको सामान्य बोलचालमा संक्रमण सर्दैन । अधिकांश लक्षणविहिनलाई खोकी, हाच्छ्युं, घ्यारघ्यार नहुने भएकोले भाइरस सर्नको लागि पर्याप्त लोड पुग्दैन ।
-नेपाल आइपुग्दा संक्रमितको रोग सार्न सक्ने अबधि ११ दिन कट्ने भएकोले टेस्ट पोजिटिभ देखिएपनि अन्य व्यक्तिलाई रोग सर्दैन ।
-नेपालमा जनवरी तथा फेब्रअरीमा कोरोना संक्रमणको पहिलो वेभ आइसकेको बिभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्न सकिन्छ । केहि जनसंख्या पहिलो वेभले इम्युन भएका छन् । तसर्थ र्र्यािपड टेस्टमा हजारौंको एन्टिबोडी पोजिटिभ देखिएको छ । यो दोस्रो वेभले पनि जनसंख्याको केहि हिस्सालाई इम्युन बनाउने छ । यसै गरेर समाज क्रमशः इम्युन हुँदै जानेछ ।
-सामाजिक दुरी, मास्कको प्रयोग, सरसफाई, घरमा बस्ने बानी आदिले गर्दा सिधै संक्रमण हुनेको संख्या न्यूनतम हुनेछ ।
-रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन गुर्जो, बेसार, अमला, कागती, भिटामिन सि, भिटामिन डी खाने, घाम ताप्ने, ब्यायाम गर्ने, योग तथा ध्यान गर्ने लगायतका अभ्यास जीवनशैली हुन लागेका छन् ।’